Mmalite nke ika
Mkpa iru eru
• KPAL bụ ama ama ụgbọ ala Automotive Protection Film, nke sitere na United States.
• KPAL nwere ọtụtụ ihe nkiri ihe eji emepụta ụgbọ ala; PPF (Agba Protection Film), LPF (Ìhè Nchedo Nkiri), RPF (Protectionlọ Nchedo Nkiri), WPF (Windshield Protection Film), wdg.
• E mepụtara ngwaahịa nke KPAL site na sistemụ arụmọrụ jikọtara ya na usoro R&D dị elu. Teknụzụ KPAL nwere ike ikpuchi TPU resin, TPU na-akpụ akpụ na kemịkalụ kemịkalụ na mkpuchi mkpuchi.
• The TSP (Nka na ụzụ Ngwọta Inye) Team na-akwado iche iche oru ngwọta gụnyere echichi, mmezi na nsogbu-agbapụ ndị ahịa.
Ningbo Chem-gbakwunyere New Ihe Tec.Co., Ltd e tọrọ ntọala
Ningbo Chem-gbakwunyere PPF na China anụ ụlọ ahịa
E hiwere ụlọ ọrụ JW Film
Ejiri ntọala KPAL
PPF nke ihe nkiri KPAL malitere ịmị ndị ahịa mba ofesi